Famoahana hira :: Hampiara-peo i Big Mj sy Abel Anicet • AoRaha
Fiarahan’ny mpikatroka amin’ny sehatra samy hafa. Nambaran’i Big Mj tao amin’ny pejy tambazotrantserasera Facebook, omaly, ny fiaraha-miasany amin’i Abel Anicet, kapitenin’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny taranja baolina kitra na ny Barea. Nampahafantarin’izy mirahalahy ny fampiaraham-peony ao anatin’ny hira vaovao, izay hivoaka atsy ho atsy.
Nisafidy ny tsy hilaza ny hafatra hofonosin’io vokatra io sy ny lohateniny, hatreto, i Big Mj. Tsy hiova amin’ny gadon-kira efa nahafantarana an’ity mpanakanto malaza ity, hatramin’izay, ny hira hoentin’izy sy Abel Anicet.
« Hataonay fanomezana ho an’ny mpankafy izany. Samy kendrenay avokoa na ireo mpanaraka anay eto an-toerana na ireo mipetraka any ampitan-dranomasina. Mampanantena kosa izahay fa andro vitsy sisa no andrasana dia hivoaka ny hira », hoy i Big Mj tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Eo am-pamaranana ny fanakambanana ny feo ireo teknisiana ao amin’ny Bj Label, amin’izao fotoana izao, araka ny fantatra. Io trano mpamokatra io ihany koa no nikarakara ny pitsopitsony amin’ny fanaingoana ny hira, toy ny famoronana ny feon-kira, ny fanakambanana ny feo ary ny fanatsaram-peo isan-karazany. Samy nanoratra ny anjara tonon-kirany kosa i Big Mj sy Abel Anicet.
« Ny feo ihany aloha no hivoaka, atsy ho atsy, satria iaraha-mahalala ny zava-mitranga eto amin’ny firenena sy any amin’ny firenena hafa. Ho avy miandalana ny rakitsary rehefa resy tanteraka ny Covid19 », hoy hatrany i Big Mj.
Fifindrana mpilalao :: Hiverina hilalao ao amin’ny FC Lorient i Jeremy Morel